Madaxweyne Xasan sheekh oo shacabka soomaaliyeed amaan Farabadan usoo jeediye kadib Garab istaaga Dowladiisa | Wahel Kaga Koowaad ka dhigo Badweyn	Wednesday, May 22nd, 2013	Home
Madaxweyne Xasan sheekh oo shacabka soomaaliyeed amaan Farabadan usoo jeediye kadib Garab istaaga Dowladiisa
Number of View :172Madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shacabka Soomaaliyeed uga mahadceliyay garab istaagida dowladda cusub ee dalka Soomaaliya.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in hadii aysan shacabka Soomaaliyeed aysan garab istaagin Dowladiisa cagaheeda istaagi laheyn.
Wuxuu sheegay in guud ahaan shacabka Soomaaliyeed uu udiraayo hambalyo ku aadan garab istaagida Dowladda,isaga oo sheegay in hadafka uu yahay in la gaaro Soomaali oo midoowday.
Ugu dambeyn Madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa usheegay shacabka Soomaaliyeed Dowladda inaysan aheyn KMG balse ay tahay Dowladd rasmi ah oo Soomaali ay leedahay isaga oo intaasi raaciyay hadalkiisa in ujeeda ay ka lahaayeen caalamka ay ka heleen.
Dowladda Soomaaliya ee uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa iminka ku dadaalaysa inay kasbato shacabka Soomaaliyeed kuna dadaasho ammaanka Gobalada iyo caasimada Muqdisho.